नेपाल टेलिकमका विभन्न प्रमोसनल अफर के छन् ? - HAMRO YATRA
नेपाल टेलिकमका विभन्न प्रमोसनल अफर के छन् ?
काठमाडौं, १६ साउन । नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई प्रदान गर्दै आएको इन्टरनेट सेवाको मूल्य घटाएको छ । कम्पनीले जीएसएम-सीडीएमए तथा एडीएसएल-एफटीटीएच सेवाका ग्राहकलाई लक्षित गर्दै सोमबारबाट लागु हुने गरी विभिन्न प्रमोसनल अफर सार्वजनिक गरेको छ ।
यो अफर ९० दिनसम्म उपलब्ध हुनेछ । उक्त अफर अन्तर्गत ग्राहकले एक एमबीपीएस गतिको एडीएसएल इन्टरनेट करसहित मासिक एक हजारमा पाउने छन् । यस अघि मासिक एक हजार १७ रुपैयाँमा दुई ५६ केबीपीएस गतिको एडीएसएल उपलब्ध हुँदै आएको थियो । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
त्यसैगरी टेलिकमले भोल्युम बेस्ड एडीएसएलको मूल्य पनि घटाइएको छ । पहिले २१ जीबी डाटाको लागि १९ सय ८० रुपैयाँ शुल्क लिदै आएको टेलिकमले अब १५ जीबी डाटा तीन सयमा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
सँगै २५ जीबी डाटाको पाँच सय र ४० जीबीको डाटाको मूल्य सात सय तोकिएको छ । यी डाटाको गति वान एमबीपीएस हुनेछ । त्यसैगरी टेलिकमले दर्ता शुल्क पनि घटाइएको छ । पहिले दर्ता शुल्क कर बाहेक पाँच सय लिदै आएको टेलिकमले भोल्युम बेस्ड डाटाको लागि कर बाहेक दुई सय र अनलिमिटेड डाटाको लागि तीन सय रुपैयाँ तोकेको छ ।
अब ग्राहकले पहिलेकै मूल्यमा पहिले भन्दा डबल भोल्युमको एफटीटीएच सेवा समेत प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । नयाँ योजना अनुसार १० एमबीपीएस गतिको एफटीटीएच प्याकेज अन्तर्गत तीन महिनाका लागि दुई सय ४० जीबी, ६ महिनाका लागि पाँच सय जीबी र १२ महिनाका लागि १२ सय जीबी डाटा पहिलेकै मूल्यमा प्रयोग गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ ।
त्यसैगरी १०० एमबीपीएस गतिको प्याकेज अन्तर्गत १२ महिनाका लागि १२ सय जीबी डाटा प्रयोग गर्न सकिने भएको छ । यसका साथै ग्राहकले विदेशबाट आएको कल उठाउदा अब बोनस प्राप्त गर्ने भएका छन् ।
जीएसएम÷सीडीएमए प्रिपेड र पोष्टपेडका ग्राहकले एक सातामा सात मिनेट वा त्यो भन्दा बढी कल रिसिभ गर्दा नेपाल टेलिकमको नेटवर्क भित्र सात मिनेट भ्वाइस कल गर्न र सात वटा एसएमएस निःशुल्क पठाउन सक्ने भएका छन् । कम्पनीले सम्पुर्ण अफर पुराना ग्राहकलाई समेत उपलब्ध हुने जानकारी गराएको छ ।